Dumarka oo noqday kuwa ugu badan ee loogu diido sharcigga daganaanshaha dalalka waqooyiga Yurub - iftineducation.com
iftineducation.com – Dalalka ku yaala waqooyiga Yurub ayaa haweenka magangalyadda weydiista ay yihiin kuwa ugu badan ee codsigooda la diido, marka la bar bardhiggo ragga.
Warbixin la soo saaray oo ay heleen nuqulo ka mid ah wasiiradda sinaanta ee dalka ku yaala waqooyiga Yurub ayaa lugu sheegay inta u dhaxeeysa 70 ilaa 80% dadkii magangalyadda dalalkaasi weydiistay misna la yiisay sharciga daganaashaha ay yihii rag marka la bar bar dhigo sanadkii ina dhaafay.
Outi Lepola, waa barre culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Tammerfors ee dalka Finland. Wuxuu dib u eegis ku sameeyey dadyowga la siiyey sharcigga deganaanshaha ee dalkaasi. Waxaa uu tilmaamay in farqi weyni u dhaxeeyo ragga iyo dumarka, taas oo ah in dumarka ay ka tiro yar yihiin ragga ogolaanshaha la siiyey. Dadka sharciga dagaanshaha laga siiyey Finland ayaa waxaa ay haweenku gaaarayaan 55% halka raggana ay yihiin 60%. Tiro kale oo intaas ka badan ayaa dalka Denmark-na waxaa ay muujisay baaritaankii la sameeyey in haweenku sharciga la siiyey ay dhan yihiin79%, halka ragguna 87% la siiyey kana tiro yar yiiin ragga.
Wadamadda Noorweey iyo Aaysland ayaa tirrooyinkood yihiin kuwo isku dhow, halka Iswiidhan aan weli la soo gudbin tirro sax ah oo la xirriira farqiga u dhaxeeya ragga iyo haweenka magangalyo doonka ah ee sharciyadda la siiyey.
Wasiiradda sinaanta dalkaan Iswiidhan Åsa Regnér, ayaa sheegtay in warbixinta la xirriira farqiga u dhaxeeya haweenka iyo ragga ay tahay arrin xiiso leh, islamarkaasina la baarayo asbaabaha dhabta ah ee salka ku heeyso tiradda is dheer ee ragga iyo dumarka ee siint sharciga daganaanshaha.
“Qorshe u sameeynta ayaa ah in laga jawaabo su, aallo muhiim ah” ayey ku tiri war-murtiyeed ay soo saartay wasiiradda sinnaanta dalkaan Iswiidhan oo ka hadlaysay warbixintaas la soo saaray ee lugu sheegay in haweenku yihiin kuwa ugu badan ee sharciyadda loogu diido dalalka dhaca waqooyiga Yurub. Dhinaca kale dalka Finland-na wasiirka u qaabilsan sinnaanta ayaa dhankiisa wuxuu ku tilmaamay warbixintaasi arrin yaabkeeda wadata, maxaa yeelay buu yiri dalalka Noordiga waxaa ay ahaayeen kuwo xagga sinnaanta xoogga saaray marka laga hadlayo muddadda codsiga magangalyo doonimadda lugu jiro. Ugu dambeyntii warbixintan ayaa lugu xusay ineey jiro arrin sababtay kala sooca ragga iyo dumarka ee muhaajiriinta ah. Saas oo ay tahana aaneya jirin jawaab sax oo laga bixin karro sidda ay ku dhacday in haweenka sharciyada loogu diido dalalkaasi raggana ay u noqdeen kuwo ka tiro badan dumarka sharcigga dagaansho la siiyey.
Nin baa ii tagay waxaan ka baqayaa inaan uur qaado
Norway oo Dad Soomaali ah Dib u Celisay